Ngwa zuru oke maka izu ike, Noisi, nke a na -enye maka € 0,10 | Androidsis
Noisli na-enye maka € 0,10; ndị quintessential ngwa nke izuike ụda
Na nke a ọha mmadụ na usoro siri ike nke ọ na-esiri ike ịnwe ohere nke gị nke ịgbachi nkịtị na-ekpuchi ụlọ ahụ na ntụrụndụ na-abịakwute usoro ụjọ gị na mmetụta uche gị niile, ị ga-achọ ụfọdụ nhọrọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ iji nyere aka mee ka uche na ọnọdụ anyị dị jụụ. Ọ dabere na nke a na anyị na-amịpụta nke ọma ma ghara ilegide shre na-anwa iku ume obere oge awa ole na ole nke nnukwu nrụgide.
Enwere ngwa ndị bịara enyemaka anyị na nke a bụ Noisli. M na-ama-ekwu banyere ya ọnwa abụọ gara aga m wee laghachikwuru ya ka ị mara na ọ nọ na-enye maka € 0,10 na Playlọ Ahịa Google. Otu ohere dị egwu iji nweta ụda izu ike niile nke ngwa a na-enye na nke ahụ na-enyekwa ohere ịgwakọta ha ka mmiri ozuzo na ogo nke ahịhịa jikọta iji mepụta njikọta nke na-enye anyị ohere ịgafe ụwa kachasị mma nke nsogbu ha na-adịghị adị.
Noisli bụ ndabere na ụda ụda jenerato ka ị nwee ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ zuru ike. Nwere elu àgwà ihere na-ada Nke ị nwere ike imbibe onwe gị n'ime ha iji pụọ na mkpọtụ ahụ n'okporo ámá, oke olu nke onye agbata obi gị ma ọ bụ mpi ndị ahụ na-ada mgbe niile ma nwee ike ịbanye na akwara gị.
Noisli bụkwa ngwa nwere ike ịba uru maka ndị na- ha na-arụ ọrụ na-enye klaasị yoga ma ọ bụ ụdị ihe omume ndị ọzọ. Site na sistemụ ụda dị mma, Noisli nwere ike ị nye ebe dị mma nke ụlọ ebe a na-emegharị ya bi na obi iru ala na ịdị jụụ ka ndị nọ n'ime ya nwee ike ịgagharị na oghere na mmetụta ndị ọzọ.
una ọma na-atụ aro ngwa maka ahụ ike na izu ike.
Noisli - Nrụpụta ihe, Ntinye uche & Ezumike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Noisli na-enye maka € 0,10; ndị quintessential ngwa nke izuike ụda
Otu esi azọrọ mgbatị na Pokémon GO
Nwere ike ịmaraworị na gam akporo 7.0 Nougat isi mmalite nke ngwa